Maxaa looga hadlay shirkii golaha wasiirrada Soomaaliya? – Puntland Post
Posted on April 8, 2021 April 8, 2021 by Desk
Maxaa looga hadlay shirkii golaha wasiirrada Soomaaliya?
Shirka Khamiis laha Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo guddoominayay Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa maanta looga hadlay amniga, abaaraha iyo saameynta caafimaad ee dalka uu ku yeeshay safmarka Covid-19.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ka codsaday Ganacsatada Soomaaliyeed in qiimaha maciishada hoos loo dhigo bisha Ramadaan, isla markaana bulshadu is caawiso, bacdamaa uu dalka saameyn dhaqaale ku yeeshay Safmarka jira.
Golaha Wasiirrada ayaa warbixin ka dhageystay Guddiga abaaraha oo ka hadlay dhibaatooyinka ka dhashay abaarihii ku dhuftay qaar kamid ah deegaannada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Ugu dambeyn golaha ayaa ansixiyay xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka oo soo gudbisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha.